अरू रोगले भन्दा कोरोनाबाटै बढी मृत्यु, करिब ३२ प्रतिशत मृत्यु कोरोनाजन्य जटिलताका कारण – Samatal Online
अरू रोगले भन्दा कोरोनाबाटै बढी मृत्यु, करिब ३२ प्रतिशत मृत्यु कोरोनाजन्य जटिलताका कारण
काठमाडौं । हालसम्म मुलुकमा कोभिड–१९ कै कारणले भन्दा पनि अरू नै स्वास्थ्य समस्या भएकामा यसको संक्रमण हुँदा बढी मृत्यु भएको ठानिँदै आएकामा अब यो गलत सावित भएको छ । कोभिड–१९ बाट बुधबारसम्म मृत्यु भएका १ सय ७५ जनाको तथ्यांक केलाउँदा कोरोनाजन्य जटिलताकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।
१९ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । यो उमेर समूहकामा भने प्रायः सबैमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित जटिलता नै मृत्युको मुख्य कारण छ । यस्तै नवजात शिशुदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यो उमेर समूहका अधिकांशलाई झाडापखालाको समस्या देखिएको थियो । म्याग्दीका ४९ दिने शिशुको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । ती बालकको मिर्गौलामा गम्भीर समस्या थियो ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार पूर्ववत् स्वास्थ्य समस्या भएका तथा विभिन्न कारणले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई नै कोरोना संक्रमणले सबैभन्दा बढी असर गरेको छ ।
‘बढी उमेर समूह, कमजोर स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएकालाई नै कोरोनाले बढी असर गर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्दै आएको छ । नेपालमा पनि त्योभन्दा फरक अवस्था रहेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले समुदायमा रोग फैलन दिनु हुँदैन । समुदायमा गयो भने हताहती हुनेको संख्यामा वृद्धि हुने जोखिम रहन्छ ।’
सरकारले कोरोनाको परीक्षण तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा यथोचित कार्य गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा अहिले पनि कोरोनाको जोखिम घटेको छैन । ‘सरकार अघिअघि, कोरोना पछिपछि हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा कोरोना अघिअघि, सरकार पछिपछि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि एक लाखभित्र नियन्त्रण गर्न सके धेरै हदसम्म हताहत हुनेको संख्यालाई कम गर्न सकिन्थ्यो । नत्र धेरै ठूलो क्षति नहोला भन्न सकिन्न ।’
डा. न्यौपानेका अनुसार विकसित देशहरू बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई बचाउन सफल भएका छन् । नेपालमा भने स्रोत साधनको कमीका कारण बचाउन सकिने उमेर समूहकाहरू पनि जोखिममा पर्ने खतरा छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. न्यौपानेका अनुसार रोग कति गम्भीर छ भनेर थाहा पाउन सीएफआर (केस फ्याटालिटी रेट) प्रयोग गरिन्छ । यो निश्चित समयभित्र सो रोगले मृत्यु भएका जम्मालाई जम्मा संक्रमितहरूको संख्याले भाग गरेर निकालिन्छ । कुनै रोगको वास्तविक सीएफआर त्यो रोग पूरा नियन्त्रणमा आएपछि मात्र निकाल्न सकिन्छ ।
कोभिडको सन्दर्भमा अहिले निकालिने सीएफआर प्रारम्भिक मात्रै हुन्छ । यो रोगको प्रकृतिले अहिलेसम्म निको भएका वा मृत्यु भएकाहरूलाई मात्र समावेश गरेर सीएफआर निकाल्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । यसरी निकाल्दा संसारको कोभिड–१९ को सीएफआर करिब ४.७ प्रतिशत, अमेरिकाको करिब ५ प्रतिशत, भारतको करिब २.३५ प्रतिशत, श्रीलंकाको करिब ०.४ प्रतिशत र नेपालको करिब १ प्रतिशत हुन्छ ।
पछिल्ला केही महिनाको तथ्यांक मात्र लिने हो भने नेपालमा सीएफआर योभन्दा बढी देखिन्छ । ‘नेपालमा परीक्षणको सीमितताले सबै संक्रमितहरूको पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले नै कोभिडको सीएफआर कम छ भनेर भन्ने बेला भएको छैन,’ डा. न्यौपानेले भने, ‘पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेकाले सीएफआर पनि वृद्धि हुने देखिन्छ ।’
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ७१ जनाको प्रदेश २ मा मृत्यु भएको छ । प्रदेश २ को पनि पर्सामा सबैभन्दा बढी ३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यही प्रदेशको धनुषामा १२ जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ । पर्साको छिमेकी जिल्ला बारामा पनि १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रदेश २ का अन्य जिल्लामा भने मृत्युको संख्या दोहोरो अंकमा छैन । कोरोनाले वाग्मती प्रदेशमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले वाग्मती प्रदेशकै सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाको संक्रमणले ज्यान गएको थियो ।
वाग्मतीमा मृत्यु भएकामध्ये अधिकांश अस्पतालमा उपचाररत थिए । यो प्रदेशमा संक्रमित हुनेको कुल संख्या ५ हजार ४ सय ९४ रहेको छ भने निको हुनेको संख्या केवल ९ सय १९ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ५ सय ७५ छ ।
प्रदेश ५ मा २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या ५ हजार ९ सय २२ छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिममा हालसम्म १० जनाको ज्यान गएको छ । मुलुकमा सबैभन्दा पहिलोपटक दोस्रो स्तरको संक्रमण देखिए पनि यो प्रदेशमा धेरै हताहती भएका छैनन् ।
हाल यो प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या ५ हजार ६ सय ३१ रहेको छ । तीमध्ये ४ हजार ५ सय ९४ जना संक्रमण मुक्त भएको तथ्यांक छ । गण्डकी प्रदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुगेको छ । गण्डकीमा संक्रमितको संख्या २ हजार ६५ छ । कर्णालीमा २ हजार ४ सय २ जनालाई संक्रमण देखिएको छ जहाँ ४ जनाको मृत्यु भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट